टेलिकमद्वारा दसैँ अफर जारी, केकस्ता अफर छन्? पुरा पढ्नुहोस्… – Bikash Khabar
टेलिकमद्वारा दसैँ अफर जारी, केकस्ता अफर छन्? पुरा पढ्नुहोस्…
Top News मनोरञ्जन सम–सामयिक
सोमबार, १८ आश्विन २०७८ गते २०:४९ मा प्रकाशित	Author Pradip Adhikari	Comment(0)	190 Views
१८ असोज,काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले चाडपर्वका अवसरमा मङ्गलबारदेखि विभिन्न डाटा, भ्वाइस प्याक तथा रिचार्ज गर्दा बोनससहितको ‘फेस्टिबल अफर’ उपलब्ध गराउने भएको छ ।
यसैगरी अफर प्राप्त हुने अवधिमा एमपोसमार्फत रिचार्ज गर्दा बोनसको रुपमा डाटा प्याक उपलब्ध गराइने र रु २०० देखि रु ४९९ सम्म रिचार्ज गर्दा दुई दिनभित्र प्रयोग गर्न सकिने ५०० एमबी र रु ५०० भन्दा बढीको रिचार्ज गर्दा चार दिनभित्र प्रयोग गर्न सकिने १,०२४ एमबी डाटा प्याक उपलब्ध हुने प्रवक्ता जोशीको भनाइ छ । उल्लिखित प्याकेज प्राप्त गर्नका लागि ग्राहकले *1215# डायल गर्नुपर्दछ । कम्पनीको ‘नेपाल टेलिकम’ एपबाट पनि यससम्बन्धी जानकारी लिन र सेवा खरिद गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी कम्पनीको वेबसाइट https://ntc.net.np/ मार्फत पनि यससम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न र सेवा खरिद गर्न सकिनेछ । रासस
एमालेको १०औँ महाधिवेशन बुटवलमा गर्ने निर्णय
१७ असोज,काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले पार्टीको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन बुटवलमा गर्ने निर्णय गरेको छ । ललितपुरको गोदावरीस्थि सनराइज सम्मेलन